RISC-V Foundation ichaenda kuEurope: Kwakanaka USA !!! | Linux Vakapindwa muropa
RISC-V Foundation ichaenda kuEurope: Kwakanaka USA !!!
Europe inokunda hondo dikiAsi ichiri mumamiriro ezvinhu akaomesesa uye neutera hwakakwana pamatanho mazhinji, kusanganisira vezvematongerwo enyika, venzvimbo uye zvakare tekinoroji Kukunda hakugone kutaurwa parizvino, uye nguva dzakaoma uye dzakaoma dziri pamberi penyika dzese dziri nhengo. Icho chikonzero ndechekuti kondinendi yakare ine yakakwira tekinoroji kuvimba netekinoroji iyo inouya kunyanya kubva kuUnited States neAsia.
Asi mutemo waTrump wakatora mari mukati meEurope, uye zvakare mukati meUS, uko vamwe vasina kugadzikana. Ndiyo mamiriro eiyo RISC-V Foundation, iyo inoisa chinangwa chayo kutamira kunharaunda yeEurope, kunyanya kuSwitzerland. Nekudaro, marambidziro marongero ari kutorwa nenyika yeAmerica, uye andisingafunge kuti achapera kana VaTrump vakasiya simba, havachave nemhedzisiro kumatekinoroji aya epasirese.
Wese munhu akaona zvakaitika neChina uye Android, pakati pevamwe ...
Ndinoshuva kuti Linux Foundation itevedzere iwo matanho akafanana uye famba uchienda kunzvimbo isina kwayakarerekera muEurope, angava mashoko akanaka kumunhu wese. Vamwe vanogona kufunga kuti icho chinhu chisina musoro, sezvo vari akavhurwa sosi mapurojekiti uye, nekudaro, kunyangwe kana mimwe mitero ikamisikidzwa, vanogona kuramba vachishandiswa. Asi pane mamwe mavara.
Zvechokwadi, Muna Chikumi ndakabvunza RISC-V's Andrew Waterman pamusoro pezvaizoitika kuEurope kana VaTrump vakasarudza kuisa zvipingaidzo pakushandisa ISA yakavhurika iyi. Kuvhurwa, inogona kuramba ichishandiswa, asi pane yakakosha asi. Uye ndeyekuti iyo hwaro, iri muUnited States, inogona kumanikidzwa kusarudza kuti ndiani anogona kana asingagone kuve nhengo. Uye nhengo ndidzo dzinosarudza ramangwana kana gwara rinotorwa.
Chimwe chinhu chakafanana chinoitika neakavhurika matanho uye matekinoroji Ivo akavhurika, asi masangano anozvichengeta ndizvo pasi pemitemo yenyika yavanogara. Naizvozvo, ivo vanogona kusarudza kuti ndiani angave kana asiri nhengo, ndiko kuti, ndiani anogona kana asingapindire mune akati tekinoroji. Kunyangwe vamwe vachigona kuzviita zvakasununguka chero bedzi vasingashandisi zviratidzo zvekutengesera etc.
Uye kana iri yemakwikwi ISA, chokwadi ndechekuti x86, SPARC, SIMBA, nevamwe, vese vanobva kuUnited States. ruoko kwaive kudada kweEuropean, iyo dombo, asi muchiito chisinganzwisisike, European Union yakabvumidza kutengeswa kwayo kuSoftBank, inova chiJapan, nekudaro ichirasikirwa neiyo chete yakadzikama yeEuropean ISA. Naizvozvo, chokwadi chekuti RISC-V ikozvino iri munharaunda yeEU yakanaka ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » RISC-V Foundation ichaenda kuEurope: Kwakanaka USA !!!
EndeavorOS inononoka kuburitsa vhezheni yayo ne net-installer